Iindaba - i-YOULITE iGalela ekudaleni iLizwe loHlaza
Iiblogi kunye neeNdaba>U-YOULITE Unegalelo ekudaleni iLizwe loHlaza
Ukukhuselwa kwendalo kubhekiselele kumanyathelo ahlukeneyo athathwe ngabantu ukusombulula iingxaki zangempela okanye ezinokubakho zokusingqongileyo, ukulungelelanisa ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nokusingqongileyo, nokuqinisekisa uphuhliso oluzinzileyo loqoqosho noluntu.
Phantsi kwemvelaphi yokufudumala kwehlabathi, ixesha loqoqosho lwekhabhoni ephantsi ephawulwe kukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ungcoliseko oluphantsi kunye nokukhutshwa okuphantsi lifikile njengoko bekuthenjisiwe, nto leyo ebutshintsha kakhulu ubomi babantu.
Ukuqhubela phambili ukukhawuleza uphuhliso oluluhlaza, i-YOULITE izimisele ukwenza ihlabathi libe nempilo kwaye lizinzile ngokusebenzisa izinto ezintsha.Sinegalelo ekudaleni ihlabathi elinempilo nelikhululekileyo kubathengi.Sithatha inyathelo ngokuqhubekayo ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo yemisebenzi yethu ngelixa siqinisekisa ukugxila kwi-ecosystem enempilo.
Ngenxa yotshintsho lwengcamango yokusetyenziswa kwabantu, ulwazi lwehlabathi jikelele lokukhuselwa kwendalo luye lwanda.Ukukhuselwa kokusingqongileyo njengombono woyilo kuvumela abaqulunqi ukuba badibanise i-practical kunye ne-aesthetics ukuze benze imizobo yokupakisha enomdla kunye nexabiso.
Ukuze uqhubele phambili ukukhawulezisa uphuhliso oluluhlaza, i-YOULITE iye yaqulunqa ipakethe entsha yephepha le-kraft, ishiya ukupakishwa kwesibini efunekayo ngaphambili, ukunciphisa iplastiki kunye nekhabhoni ukuya kwinqanaba eliphezulu, kunye nokubonisa ngokufanelekileyo iimveliso ngelixa ubonisa ubuhle bendalo.
Njengempahla yokupakisha ehambelana nokusingqongileyo, iphepha le-kraft liyakwazi ukuphinda lisetyenziswe kwaye lonakaliswe, elinokunciphisa ukungcoliseka kwendalo ukuya kwinqanaba elithile.
Iimfuno zayo zomgangatho kukuguquguquka kunye nokuqina, ukuxhathisa okuphezulu, kwaye inokumelana noxinzelelo olukhulu kunye noxinzelelo ngaphandle kokuphuka.
Ngokubhekiselele kwimbono ebonwayo, iphepha le-kraft linokuhlala linika abantu indalo engqongileyo kunye nenhle, i-retro kunye ne-connotative texture, ukuze yonke i-packaging design ibe nefuthe elithile elibonakalayo, lenza isimbo soyilo esilula kodwa sefashoni.
IiBhalbhu ze-LED ezingakumbi
Njengoko uqoqosho lwekhabhoni ephantsi kunye nobomi bekhabhoni ephantsi bufumana ingqalelo ngakumbi nangakumbi, ubomi bekhabhoni ephantsi abuyona nje indlela yokuphila, kodwa noxanduva oluzinzileyo lokusingqongileyo.
Njengomntu osebenza kwifilosofi yeshishini eliluhlaza, i-YOULITE iya kuhlala izama ukunika abathengi umgangatho ophezulu, ohlukeneyo kunye namava obomi obunempilo obuzinzileyo, kunye nokudala ubomi obuphilileyo be-ecology kubathengi "abanotshintsho olunenjongo".
Ukukhanyisa kwezemfundo kuba yindlela entsha Ngaphambili:
Izibane zangaphandle&Inkundla, Isibane sangaphandle seDonga, Camping yangaphandle Solar Led Ligh, UkuKhanya kweNtendelezo, Isibane sangaphandle soKhukula, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela,